यसरी बिस्तारै खुल्दैछ ‘दरबार’ : छोरीसहित उपस्थित भएकी पूर्वयुवराज्ञी हिमानीले के भनिन् ? — SuchanaKendra.Com
यसरी बिस्तारै खुल्दैछ ‘दरबार’ : छोरीसहित उपस्थित भएकी पूर्वयुवराज्ञी हिमानीले के भनिन् ?
काठमाडौं, । आफ्ना सामाजिक काम र अतितसहित राजसंस्थाका पारिवारिक सदस्य वैचारिक रूपमा पनि खुल्न थालेका छन् । यहि क्रममा आइतबार पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाह छोरी पूर्णिकासहित हिमानी ट्रष्टको पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित भइन् ।
कोषले प्राप्त गरेको ५०० प्रति पुस्तक विक्रिबाट उठेको रकम दैवी प्रकोप कोष स्थापना गरी उद्दारका लागि खर्च गरिने हिमानीले बताइन् । हर्षित मुद्रामा देखिएकी हिमानीले भनिन्,‘अब दैवी प्रकोप उद्दार कोष खडा गरी ट्रष्टले अझ प्रभावकारी ढंगले काम गर्नेछ ।’